Garsoorayaasha ugu fiican Soomaaliya oo qaban doona cayaarta ugu adag ee bug baxa tartanka Champions League-ka Africa+SAWIRRO – Gool FM
Baliil April 5, 2016
3:Sulaymaan Sh Bashiir Cabdi: Waa Calan walaha labaad
4;Xasan Maxamed Xaaji:Garsooraha afaraad ee Kaydka.
Ciyaartan oo u dhexaysa labada kooxood ee kale ah Mamelodi Sundowns oo ah kooxda haysta horyaalka Koonfur Africa iyo AS Vita Club oo ka dhisan DR Congo waana lugta koowaad ee ee bug baxa CAF Champions League.
Lugta koowaad ee kulankan CAF Champions League ayaa waxaa la dheeli doonaa April 10 -04-2016 Maalinta axad ah hadii uu eebe idmo.
Sikastaba garsoorayaasheena Soomaaliyeed ayaa aad loo soo amaanaa marka ay ciyaaraha dibada soo qabtaan waana tan ay xiriirka CAF mar kasta casuumaad ugu soo fidiyaan.
CL: BAR VS ATL 2-1...BAY VS BEN 1-0...Barca & Bayern oo dirqi ku baxsaday + Sawirro